Ikhishi cellulose Sponge, ezicindezelwe cellulose Sponge - Nekho
Ningbo Nekho isipanji ubuchwepheshe co., Ltd yasungulwa ngo 2012. Kuyinto yokukhiqiza ifektri ukuthekelisa-oriebred bekwi-ukukhiqizwa professional kanye seles of cellulose isipanji emabhuloki bese izingcezu.
Imboni ihlanganisa indawo ukwakhiwa 25000M2 nabasebenzi abangaphezu kuka-100. isipanji cellulose sivele sidlulile izitifiketi REACH, CA65, FSC. Kukhona lab ezinkulu, ikhwalithi kanye nokuphepha imikhiqizo lilawulwa.
OkuningiNingbo Nekho Sponge Technology Co., Ltd.
absorbency ezinhle amanzi futhi iqine
esetshenziselwa ngokuzenzakalela futhi endaweni achitectural
esithambile futhi iqine
Imidlalo Sponge 70-0134-21
Ngo Pede mi liquet
Yaqalwa ngo-Agasti 2001, imikhiqizo Ningbo Nekho yasendlini Co., Ltd. kuyinto nomkhiqizi ukuthekelisa ngamakhasimende onguchwepheshe ekukhiqizeni nokudayiswa wokuhlanza imikhiqizo nendlu izidingo zansuku zonke. Ngezinye presentthe inkampani ihlanganisa indawo 16500m2 ...
I-cellulose ezicindezelwe Sponge, ezicindezelwe cellulose Yokuhlanza Sponge , anwebekayo Sponge , Okusaqanda cellulose Ikhishi Sponge, Ezicindezelwe Sponge cellulose, Onomfutho cellulose Sponge kobuso,